Carla Bruni – Quelqu’un ma dit | Ma Shwe Mi
Quelqu’un m’a dit (someone told me) ငါ့ကို တစ်ယောက်ကပြောတယ် လို့ အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ ပြင်သစ်သီချင်းလေး။်အဲဒီသီချင်းကို ပထမဆုံးစကြားဖူးတာက Alliance Francaise မှာ ပထမဆုံးပြင်သစ်သီချင်းအဆိုပြိုင်ပွဲ လုပ်တော့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ၀င်ပြိုင်ချင်တယ်။ ဒါနဲ့ စာရင်းသွား သွင်းပြီးတော့ ပြင်သစ်သီချင်း ဆယ်ပုဒ်လားမသိဘူး ပါတဲ့ စီဒီတစ်ချပ်ရခဲ့တယ်။ စီဒီမှာပါတဲ့ သီချင်း တွေနားထောင်၊ ကိုယ်အဆိုနိုင်ဆုံးသီချင်းကို ရွေးဆိုပြီးပြိုင်ရမယ်ပေါ့။ သူငယ်ချင်းနဲ့ လိုက်တဲ့သီချင်း တစ်ပုဒ်ရွေးပေးဖို့ သီချင်းတွေကို အပြန်ပြန်အလှန်လှန်နား ထောင်ရင်း နဲ့ မှ နားထဲစွဲ သွားတဲ့သီချင်း။ အဲဒီကထဲက ပြင်သစ်စာနဲ့ အထိမအတွေ့ မရှိတာလည်း ၂ နှစ်လောက်ရှိ နေပြီဆိုတော့ သီချင်းစာသား တွေကို အပြည့်အစုံ တော့နားမလည်ဘူး။ သီချင်းစာသားပါတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ပေး ထားပေမယ့် အဓိပ္ပာယ်ကို လည်းသိပ်နားမလည်ခဲ့လှဘူး။
သီချင်းဆယ်ပုဒ်မှာမှ ဒီတစ်ပုဒ်ထဲကို နားစွဲမိတဲ့ အဓိကအကြောင်းကတော့ အဆိုတော်ရဲ့ အသံချိုချိုနဲ့ ခံစားချက်အပြည့်သီဆိုထားတဲ့အသံ ကိုကြိုက်လို့ ပါပဲ။ သီချင်းစာအုပ်ထဲမှာ အဆိုတော် နာမည် ပါ၊မပါတော့မမှတ်မိတော့ဘူး။ ဒါပေမယ့် သူ့ ရဲ့ တိုးတိုးဖွဖွ ဆိုတဲ့အသံလေး ကိုကြိုက် လွန်းလို့ သီချင်းစာသားလေးတွေကို တတ်သလောက်မှတ်သလောက်နားလည်အောင်ကြိုးစားကြည့်ရင်း သီချင်းစာသား အဓိပ္ပာယ်လေး ကို လည်းကြိုက်သွားခဲ့တယ်။
ဒီအဆိုတော်Carla Bruni က လက်ရှိပြင်သစ်သမ္မတ Nicolas Sarkozy ရဲ့ ဇနီးပါ။ မရွှေမိ ဒီသီချင်းကိုစနားထောင်ဖူးတဲ့ ၂၀၀၅-၂၀၀၆ လောက်တုန်းကဖြင့်သူတို့တောင်တွေ့ ဦးမယ်မထင်ဘူး။
ချစ်သူနဲ့ ခွဲခွာခဲ့ရတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀၊ကံကြမ္မာအပေါ်မှာထားတဲ့သဘောထား၊၊ သူ့ချစ်သူက သူ့ကိုချစ်နေတုန်း ပဲဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်၊ အဲဒါလေးတွေကို လှလှပပ ဖွဲ့ ထားတယ်လို့ ခံစားမိတယ်။ ပြင်သစ်စာကိုသာ ကျွမ်းကျင်သူအဆင့်တတ်မယ်ဆိုရင်တော့ သီချင်းကို ပိုပြီးခံစား နိုင်မယ်ထင်တာပဲ။ translator သုံးပြီး ဘာသာပြန်တဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်တချို့ ဟာ မူရင်းသီချင်း၊မူရင်းဘာသာစကားရဲ့ ပေးချင်တဲ့ ခံစားချက်၊ ရသကိုအပြည့်ပေး နိုင်လေ့မရှိဘူးလို့ လည်းထင်မိတယ်။ မူရင်းဘာသာကို အပြည့်အ၀နားလည်နိုင်ရင်တော့ ခံစားလို့ အကောင်းဆုံးပဲပေါ့။ အခုတော့ တတ်သလောက်မှတ်သလောက်နဲ့ ပဲ ခံစားလိုက်တော့တယ်။
မြသန်းတင့် -ကျွန်တော်နှင့် ဂျာနယ်ကျော်မမလေး (၁၂)	မြသန်းတင့် -ကျွန်တော်နှင့် ဂျာနယ်ကျော်မမလေး (၁၃)
1. မရွှေမိအစ်မတော် | July 25, 2010 at 4:13 am
မရွှေမိ ခွစ်ခွစ် I happened to get to your blog now. 😛
2. mashwemi | July 25, 2010 at 3:48 pm
ဘူလဲကွ..မရွှေမိအမတော်ဆိုပီး။ ဂျပန်သူရဲကား ရိုက်မယ့်အမကြီးတော့မဟုတ်လောက်ဖူး။ 😛
3. ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ | June 20, 2010 at 11:56 pm
mr guitar မှာလုပ်တဲ့ပွဲ